तिहार कसरी मनाउँदैछन् चलचित्रका चर्चित अनुहार ? – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > तिहार कसरी मनाउँदैछन् चलचित्रका चर्चित अनुहार ?
३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१ bampijhyala
बाँपीझ्याला, नेपालीको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारलाई दाजुबहिनी, दिदीभाइबीच प्रेम र आत्मीयता बढाउने पर्वका रूपमा लिइन्छ ।
खास गरेर भाइटीकाको समयमा दिदीबहिनीबाट दाजुभाइले पाउने आशिर्वादलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ । तिहारमा दिदीबहिनी जसरी पनि दाजुभाइलाई भेट्न पुग्छन् वा दिदीबहिनी भेट्न दाजुभाइ पुग्छन् ।
नेपाली कलाकारले पनि तिहारलाई महत्त्वका साथ मनाउँछन् । पछिल्लो पुस्ताका सबैभन्दा सफल अभिनेता अनमोल केसीका सहोदरा दिदीबहिनी छैनन् तर उनको निधार कहिल्यै खाली हुँदैन । किनभने उनका बुवा भुवनले अनमोलकी आमा ल्याउनुअघि बिहे गरेका थिए विजया केसीसँग । उनीबाट जन्मिएकी छोरी काजलबाट अनमोलले सधै टीका लगाउँदै आएका छन् ।
काजल सम्भव भएसम्म अमेरिकाबाट नेपाल आउने गरेकी छन् । २ आमा भए पनि कहिल्यै अर्की आमाको छोरी भन्ने भाव उत्पन्न नभएको अनमोल बताउँछन् ।
म्युजिक भिडियोमा चर्चित अभिनेता हुन् पुष्प खड्का । उनी शनिवार लक्ष्मी पूजाको दिन धनगढीमा थिए गीतको छायांकनका लागि । उनी काठमाडौं आएपछि बहिनीको हातबाट टीका लगाउनेछन् । ‘यो पर्व मलाई असाध्यै धेरै मन पर्छ,’ उनले भने, ‘म्युजिक भिडियोको छायांकन र चलचित्रको वर्कशपमा व्यस्त छु । अब तिहारलगत्तै चलचित्रको छायांकन हुने भएकाले पारिश्रमिक बुझेका सबै म्युजिक भिडियोको काम सकाउने योजनामा छु ।’ तिहारमा दिदीबहिनीको हातबाट टीका लगाउनुका साथै आशिर्वाद लिन पाउँदा निकै खुशी लाग्ने पुष्प बताउँछन् ।
डेब्यु चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ बाट एकाएक ‘हिट’ भएकी अभिनेत्री सुहाना थापाले टीका लगाइदिने दाजुभाइ छैनन् । निर्माता सुनिलकुमार थापा र अभिनेत्री तथा निर्देशक झरना थापाकी एक्लो छोरी सुहानाले आफ्नो काकाका छोराहरू प्रनिमेस र अभिनव थापालाई टीका लगाइदिने गरेकी छन् । हिन्दू संस्कृतिमा निकै विश्वास गर्ने सुहाना श्रीकृष्ण भगवान्की भक्त हुन् । सुहानाले तिहारमा सबैभन्दा मन पर्ने कुरा भिलिमिली रहेको बताइन् ।
उनले थपिन्, ‘आफ्नै दाजुभाइ नभएर मलाई कुनै नराम्रो अनुभव हुँदैन । आफ्नो काकाको छोराहरू हुनुहुन्छ । असाध्यै माया गर्ने आफ्नै भाइजस्तै दाजुभाइ हुनुहुन्छ । उहाँलाई नै सधै टीका लगाइदिने गरेकी छु ।’
आयुष्मान देशराज जोशीका दिदीबहिनी छैनन् । उनी सँगसँगै हुर्किएका भाइ आशिरमान देशराज र आयुष्मानले आफ्नै दिदीबहिनी नभए पनि नजिकका आफ्ना आफन्तमा रहेका दिदीबहिनीसँग टीका लगाउने गरेका छन् । आयुष्मानलाई तिहार निकै मन पर्छ । भैलो, साथीभाइसँगको जमघट उनलाई खुबै मन पर्छ ।
‘जेरी’ चलचित्रकी ‘हिट’ अभिनेत्री आना शर्माले भाइटीकाको अवसरमा टीका लगाइदिने कोही दाजुभाइ छैनन् । आनाका २ दिदीबहिनी छन्, सोही कारण उनलाई दाजुभाइ नहुनुको महसूस कहिल्यै भएन । उनलाई तिहार निकै मन पर्छ । दिदीबहिनीसँग रमाइलो गरेर तिहार मनाउने आनाले दिदीबहिनीले एकअर्कालाई टीका लगाएर भाइटीका मनाउने गरेको सुनाइन् ।
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी दशैं मनाएको भोलिपल्टै अमेरिका उडिन् । यसपटकको तिहार उनले अमेरिकामै बनाउँदै छिन् । ‘सधै काम–काम भइरहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘घुमघामका लागि अमेरिका आएकी हुँ । यतै नजिकका दाजुभाइ पर्नेलाई यस पटकको तिहारको टीका लगाइदिने योजना छ ।’ वर्षाले तिहारको १ महिना भित्रमा नेपाल आउने योजनामा छिन् ।
उनी अमेरिकाबाट तुरुन्तै किन पनि आउनुपर्नेछ भने उनी अभिनित चलचित्र ‘पराई २’को छायांकन गर्नुछ । उनले थपिन्, ‘त्यो चलचित्रसँगै अरु केही प्रोजेक्टको कुरा पनि भएकाले तिहारलगत्तै आउँछु ।’
कोविड विरुद्ध लड्न थप ३ वटा अस्पतालसँग काठमाडौँ महानगरको सहयोग सम्झौता अहिलेसम्म १२ वटा अस्पतालसँग सम्झौता ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१
नेपाल सुपर लिगको उपाधि काठमाण्डौंलाई ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१
कोरोना संक्रमणबाट विगु गाउँपालिकामा एक बालकको मृत्यु ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१
८ हजार ४६ थपिए, ५ हजार ४५५ कोरोनामुक्त, १८७ को मृत्यु ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१
आज ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो ३० कार्तिक २०७७, आईतवार १५:०१